MP4 File Iweghachite - Naghachi MP4 Files mfe na rụọ ọrụ nke ọma
> Resource> MP4> MP4 File Iweghachite: Naghachi Your Lost MP4 Videos
MP4 video faịlụ na-akwado site na dị iche iche dị iche iche ngwaọrụ dị ka ese foto, PSP, iPod, color wdg Mgbe ndị na-eji ndị na ngwaọrụ dị ka nchekwa ase ịzọpụta MP4 faịlụ, ha nwere ike na-ata ahụhụ site na data ọnwụ mmadụ na mberede dị ka data ọnwụ echekwara na draịvụ ike . Mgbe MP4 faịlụ-adịghị na ebe ha kwesịrị, na-echeghị na gị MP4 faịlụ e ehichapu-adịgide adịgide. N'ezie, ị na-enwe ike naghachi furu efu MP4 faịlụ na ụzọ ziri ezi.
Ọ bụrụ na gị furu efu MP4 faịlụ na mbụ echekwara na kọmputa gị, ihe mbụ ị ga-eme bụ iji ego gị egweri biini. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ ehichapụ ha wee ghara efu egweri biini, ị nwere ike mfe ịhụ gị furu efu MP4 faịlụ site na ịpị "Weghachi ndị a faịlụ" na-agbake MP4 faịlụ ka ha mbụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị zọpụta ndị furu efu MP4 faịlụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, ị ka nwere ohere ime MP4 faịlụ mgbake mfe na rụọ ọrụ nke ọma mgbe ị na-enwe ike MP4 Iweghachite software.
Akpata MP4 faịlụ ọnwụ:
Mmadụ na mberede formatting;
Efu nke egweri biini, ma ọ bụ pịa "iwu + Hichapụ" ka ihichapụ MP4 na-adịgide adịgide;
Nje ọrịa nke MP4 videos;
Mberede ike nkwụsị na kọmputa gị;
Nrụrụ Aka nke nchekwa ase;
Wondershare Photo Recovery Software dị otú ahụ ihe dị mfe na a pụrụ ịdabere ngwá ọrụ, nke nwere ike inyere ị na-azụ na-ehichapụ, formatted, mebiri emebi ma na efu MP4 faịlụ site na draịvụ ike ma ọ bụ nkebi. Download software na-eso nduzi naghachi MP4 faịlụ na naanị 3 nzọụkwụ on Win. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ihe omume na Mac usoro, họrọ ibudata Mac version naghachi MP4 faịlụ na yiri nzọụkwụ.
Olee otú ime MP4 faịlụ mgbake
Na-agba ọsọ na MP4 faịlụ mgbake software. Họrọ nchekwa na-ajụ ebe gị furu efu MP4 faịlụ chọta si igwefoto dijitalụ, kaadị ebe nchekwa, USB ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ ndị ọzọ uka nchekwa na ngwaọrụ na esịtidem ike-akwọ ụgbọala. Jide n'aka na ngwaọrụ na ị chọrọ iṅomi a nọ ejikọta gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 1: Họrọ nkebi ebe ị ọnwụ MP4 faịlụ
Site ndepụta nke mgbagha draịva ebe a, họrọ onye nkebi ma ọ bụ mbanye si nke gị furu efu faịlụ ịchọta, wee pịa "iṅomi" button na-amalite ịgụ isiokwu. Ọ bụrụ na gị na mkpa iji naghachi MP4 faịlụ, ebe a anyị ukwuu atụ aro ka ị na-eji "iyo Nhọrọ" nke na-enyere gị aka ibelata scanning oge na rụọ ọrụ nke ọma ahụ furu efu MP4 faịlụ.
Nzọụkwụ 2: Iṅomi na-ahụ furu efu MP4 faịlụ
Mgbe scanning, nke furu efu MP4 faịlụ ga-gosiri na nchekwa na hapụrụ n'ihi na ị na-ahọrọ, ebe ndị niile nchekwa na-depụtara site faịlụ formats. Ị na-enwe ka ịhụchalụ na ewerekwa MP4 faịlụ na ị chọrọ iji naghachi wee pịa "Naghachi".
2. Ke scanning usoro, ị nwere ike pịa "kwusi" ma ọ bụ "kwụsị" mgbe ị jikwaa ahụ furu efu faịlụ na-eme atụmatụ iji naghachi ya ozugbo o kwere omume. Mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ịnọgide na-ịhụchalụ ndị ọzọ faịlụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
3. Pịa "Save iṅomi" button ịzọpụta scanning N'ihi nke mere na ị na-enwe ike ịnọgide na-video mgbake n'oge ọ bụla dị na-amasị gị.
Nzọụkwụ 3: Họrọ ịzọpụta nchekwa na-echekwa MP4 faịlụ mgbe agbake
Zọpụta MP4 faịlụ na-recoverable na gị kpọmkwem ọnọdụ, na pịa "Naghachi". Lee, anyị ukwuu ikwu na ị na họrọ ebe ọzọ si gị isi iyi partitions ebe ị-efu ndị MP4 faịlụ.
Mgbe ahụ, ị ​​na-enwe ike ịchọta MP4 faịlụ gị kpọmkwem nchekwa. E wezụga MP4 faịlụ, ị nwere ike naghachi fọrọ nke nta niile gị ehichapụ videos, nakwa dị ka foto na music.
Video nkuzi nke MP4 faịlụ mgbake